Dhawaan waxaan arki karnaa adeegyada cusub ee Apple | Waxaan ka socdaa mac
Dhawaan waxaan arki karnaa adeegyo cusub oo Apple ah
Warbixin cusub oo ka soo baxday gorfeeyeyaasha Wolf Ventures waxay dejineysaa suurtagalnimada in lagu arko adeegyo cusub Apple muddo gaaban. Waxaan haysan lahayn marka lagu daro Apple Tv +, Apple Music iyo kuwa kale oo hadda ah qayb ka mid ah Apple One, qaar cusubna sida, boostada +, Podcasts +, Keydadka + iyo labo iyaga ka badan. Waqtigan la joogo waa warar xan oo kaliya waana inaan sugno xaqiijin rasmi ah ama falanqeeyayaal badan si ay u xaqiijiyaan xaaladdan.
Shirkadda Loup Ventures ayaa soo saartay warbixin ay ku sheegayso in shirkadda Apple ay diyaar u tahay inay soo bandhigto adeegyo cusub. Iyadoo lagu xisaabtamayo guusha ay gaareen tan iyo sanadkii hore iyo tan qaas ah rubucii hore, layaab malahan in Apple ay rabto inay kordhiso isha dakhliga. Adeegyada Apple ayaa ahaa mid ka mid ah tiirarka aasaasiga ah ee shirkada sanadkaan faafa ee faafa.
Warbixinta cusub ayaa cadeyneysa suurtagalnimada jiritaanka saddex adeeg oo cusub. Xaqiiqdii wuxuu ka hadlayaa 5, laakiin laba ka mid ah ayaa aad u sheegaya iyaga oo gudbinaya oo lama siinayo kalsooni aad u badan:
Boostada +. Apple waxay diyaar u tahay inay soo bandhigto qalab cusub oo la xiriira wax soo saar shaqsiyeed Qaadashada tilmaamaha adeegyada jira, Mail + waxay bixin kartaa maaraynta sanduuqa maareynta, otomatiga iyo jadwalka.
Podcasts +. Bixin lahaa a xulashada barnaamijyada caymiska gaarka ah waxayna u oggolaan lahayd Apple inay dib u soo ceshato dhulkii ay horay u heshay shirkadda Spotify, tusaale ahaan. Sida lagu sheegay warbixinta, Podcasts + ayaa la filayaa in lagu soo daro qayb ka mid ah Apple One, iyada oo aan wax lacag dheeraad ah laga qaadin.
Kaydka +. Apple wuxuu geli karaa boqortooyada dhaqaalaha gaarka ah oo ay gacan siiso Apple Card. Waxay bixin laheyd adeegyo maaliyadeed sida xisaabaadka maalgashiga.
Waxaa sidoo kale jira jiritaanka Khariidadaha + iyo Caafimaadka +. In kasta oo macluumaad yar laga bixiyay iyaga, haddana waxaa la fahansan yahay bilaabista labadan adeeg inaan loo arkin inay tahay wax dhici kara.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Dhawaan waxaan arki karnaa adeegyo cusub oo Apple ah
Apple waxay sii deyneysaa filimkeedii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'Losing Alice' kaasoo soo baxa dhammaadka Janaayo